"सभासद्का नौटङ्की पोशाक र ब्यवहारले यो ए्ेतिहासिक संविधानसभाको उपहास र दुरुपयोग गर्दैछन् ", ठीक भन्नु भो। मलाई पनि लागेको थियो सभासद्हरुको काम संविधान बनाउने हो या सर्कस मा जस्तो रंगी चंगी पहिरन लगाएर जन र दुनीयालाई मनोरंजन दिलाउने हो ? सस्तो दिमाग बोकेका नौटंकीका कलाकारहरुले के को संविधान बनाउलान र बरु अरुले बनाइदिएछन भने सही वा ल्याप्चे चाही लगाउलान ।
अनुशासन र मर्यादा भनेको स्कुलमा मात्रै पालन गर्नु पर्ने कुरा हो भन्ने बुद्धी भा'का हरु त्यो सम्मानित स्थानमा पुगेकाछन ।
ढुङ्गेल जी म तपाईको बिछारसंग सत प्रतिशत सहमत छु।
अनि नेपालीएन जी! मलाई लाग्छ त्यहा नौटंकीका कलाकारहरु हैन भाँडहरको प्रवेश ज्यादा भएको छ । यस्तै गतिछाडा र अमर्यादित पाराले के बन्ला उत्कृष्ट संबिधान ?
हजारौं जनताको बलिदान अनेकौं विध्वंश लाखौं स्वर्णिम आश्वासनपछि जनता संविधान संविधानसभाले सारा विकृतिको अन्त्य गर्नेछ भनेर नथाक्ने देशका नेताहरुको ढाँट प्रवृत्ति छताछुल्ल भएको छ । संविधानसभा निर्वाचनपछि आफ्नै हातमा डाडु-पन्यौं लिई सातदलीय तानाशाहीले शासन चलिरहेको छ । उनीहरुको दुईवर्षे शासन हेर्ने जो कोही राष्ट्र राष्ट्रिय अखण्डता राष्ट्रिय अस्मिता एवं सार्वभौमसत्तामाथि कालो बादल छाएकोमा चिन्तित देखिन्छन्।----------------------
तपाइले भनेका इ हरफ एक्दम सटिक छन। हाम्रो राजनैतीक समस्या नै यही हो, डाड्यु पनियो जस्को हातमा पर्छ त्यसले तानाशाही प्रबिर्ती निकाल्छ अनि काम नैतिकता बिर्सेर आफ्नो र आफ्ना आसेपासेको खल्तीमात्र भर्नथाल्छ।